VaNcube: Mhirizhonga Inogona Kuitika Zvakare Semuna 2008
HARARE — Mutungamiri weMDC diki, VaWelshman Ncube, vaudza vemasangano anoshanda akazvimirira kuti mhirizhonga iri kuitika munyika pari zvino inoratidza kuti zvinhu zvinogona kushata sezvazvakange zvakaita muna 2008 apo pakaitika mhirizhonga inotyisa munyika.
Vachitaura nevatungamiriri vemasangano aya neChitatu, VaNcube vati kunyange hazvo kufa kwemwana wenhengo yeMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai kuHeadlands, Christpowers Maisiri, kwakavhundutsa nyika yese, vasori nevatsigiri veZanu PF vakatotanga kare kushungurudza vanhu mumatunhu ese munyika.
Vati nyaya yemhirizhonga inyaya iri kubata munhu wese uye dare remakurukota rakapedza maawa mana nechidimbu neChipiri richizeya nyaya iyi. Vatiwo makurukota ari kukonzera nyaya yemhirizhonga akadomwa mumusangano uyu.
VaNcube vati chinokatyamadza ndechekuti sei mhirizhonga iyi isiri kupera asi mukuru wemapurisa nemauto, uye vari mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, vari kuti vanhu vasaite mhirizhonga munyika.
Vati vakaudza VaMugabe kuti hazvibatsire kuti vati vanoda kuti kuitwe sarudzo asi vasingadi kupa zvizvarwa zveZimbabwe mukana wekuvhotera mutungamiriri wazvinoda murunyararo.
Panyaya yekuvhiringwa kwemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nekutorwa kwemaredhiyo ari kupihwa veruzhinji nemasangano aya, VaNcube vati zviri pachena kuti Zanu PF haidi kuti vanhu vawane nhau kana mashoko avanoda.
VaNcube vatiwo gurukota rinoona nezvekubatana kwematanhu, Amai Priscilla Misihairabwi Mushonga, vakapa VaMugabe redhiyo yakaita seari kutorwa nemapurisa kuti vaone kuti hapana chakashata pamaredhiyo aya.
Zvichakadai, bepanhau reHerald raburitsa mashoko ekuti VaMugabe vapa mapurisa simba rekusunga vese vari kukonzera mhirizhonga.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, uye vari mutauriri waVaMugabe, VaGeorge Charamba, vaudza bepanhau iri kuti VaMugabe vari kushushikana nemhirizhonga iri kuitika munyika.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika, uye vachitaura vakazvimirira, Muzvare Gladys Hlatshwayo, vati VaMugabe vanofanira kuona kuti mhirizhonga yamiswa kwete kungotaura chete.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda nesangano re Institutte for a Demoractic Alternative for Zimbabwe, VaJoy Mabenge, vatiwo mapurisa anofanira kuita basa rawo asina kutumwa.
Zvichakadai, Christpowers Maisiri acharadzikwa kuHeadlands neChina uye mutungamiriri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nevakuru vakuru mubato ravo, vachaenda kunoona mwana uyu achiradzikwa.